သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အကျိုးပြုလုပ်ဆောင်ချက်များ၊ ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့် ရေထုညစ်ညမ်းမှုကို လျှော့ချစေဖို့ Samsung ရဲ့'Galaxy for the Planet' က ဘာတွေလုပ်ဆောင်လျက်ရှိလဲ? - MyBiz Myanmar
နောက်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းတွေမှာ နည်းပညာကုမ္ပဏီများဟာ သူတို့ထုတ်ကုန် (Product) တွေကနေ အမြတ်အစွန်းရဖို့ တစ်ခုထဲတင်မကပဲ လူသားတွေ (People) နဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ ကမ္ဘာကြီး (Planet) ကိုပါ ထိခိုက်မှု နည်းနိုင်သမျှနည်းစေမယ့် ထိန်းသိမ်းမှု (Sustainability) လုပ်ငန်းစဥ်တွေအပေါ် ပိုပြီးအာရုံစိုက်လာကြတယ်။ Smartphone နည်းပညာသစ်များနဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ Electronics ဈေးကွက်ကို ဦးဆောင်နေတဲ့ Samsung ဟာလည်း ဒီ ၃ ချက်ကို ပိုပြီးအလေးထားအာရုံစိုက်နိုင်ဖို့ “Galaxy for the Planet” ဆိုတဲ့ ရေရှည်စီမံကိန်းကို 2021 ခုနှစ်မှာ စပြီးချပြခဲ့တယ်။
ဆိုတော့ “Galaxy for the Planet” ဆိုတာ ဘာလဲ?
“Galaxy for the Planet” ဆိုတာ 2025 ခုနှစ်အမှီ Samsung ဘက်က Sustainability နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ ချမှတ်ထားတဲ့ target များ၊ အထူးသဖြင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်စေမယ့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေ နည်းနိုင်သမျှနည်းစေဖို့နဲ့ သဘာဝသယံဇာတသုံးစွဲမှု လျှော့ချနိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုတွေ၊ လိုက်နာရမယ့် စည်းကမ်းတွေ၊ ပညာပေးမှုတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ ပါဝင်နေပါတယ်။
မိမိတို့၏ကတိပြုမှုများကို 2025 မတိုင်ခင် လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ ရှေ့ဆက်မယ့်ပြောင်းလဲမှုများ အနေနှင့်
ပလတ်စတစ်ထုပ်ပိုးမှုအားလုံးကို 2025 မှာ အပြီးသတ် ဖယ်ရှားပြီး Eco-packaging များ ပိုမိုအသုံးပြုလာဖို့ mobile product တွင်သာမက အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ထုတ်ကုန်များ အားလုံးမှာ Recycled material တွေ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ smartphone charger တွေရဲ့ ပုံမှန်အချိန်မှာ စွမ်းအင်လိုအပ်မှုကို 0.005W အောက် လျှော့ချနိုင်ဖို့ လုပ်ငန်းခွင်က Electronic waste များ လျော့ချစေဖို့ စတဲ့အချက်တွေကို အဓိကထားပြီး လုပ်ဆောင်လျက် ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကမ္ဘာ့မြေမျက်နှာပြင် ၇၁% ကို ရေထုက လွှမ်းမိုးထားပြီး ရေနေသတ္တဝါတွေနဲ့ အခြားအဖိုးတန်တွေကို မျိုးတုံးပျောက်ကွယ်မှုမဖြစ်ပဲ ဆက်ပြီးရှင်သန်နေနိုင်ဖို့ ဂေဟစနစ်က အရမ်းအရေးကြီးတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ စွန့်ပစ်လိုက်တဲ့ ပလပ်စတစ်တွေ၊ ငါးဖမ်းပိုက်ကွန်အဟောင်းတွေက ရေနေသတ္တဝါတွေရဲ့ အသက်အန္တရာယ်ကို ကြီးကြီးမားမားထိခိုက်စေကြောင်း Galaxy S22 series မိတ်ဆက်ပွဲမှာ ထည့်အသိပေးလာတော့မှ ကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်တဲ့နောက်ကွယ်က ဂေဟစနစ်ရဲ့ အကျိုးဆက်ကို သတိထားမိလာတယ်။
Samsung က ရေထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်မှ စွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်တွေ၊ ငါးဖမ်းပိုက် အဟောင်းတွေကို လိုက်လံသိမ်းဆည်း ဆယ်ယူကာ “OBP – Ocean Bound Plastic” အဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေနဲ့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကို မိမိတို့၏ Galaxy Device တွေမှာ ပြန်လည်အသုံးချနိုင်မယ့် အားထုတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်အစပိုင်းမှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Galaxy S22 series မှာလည်း Volume နဲ့ Power ခလုတ်အတွင်းပိုင်း၊ S Pen ရဲ့ အတွင်းဘက် Cover စတာတွေကို ငါးဖမ်းပိုက်ဟောင်းက Nylon Plastic တွေကို ကုန်ကြမ်းယူ သန့်စင်ပြီး ပြန်လည် အသုံးပြုထားတယ်။ မှတ်တမ်းတွေအရဆို Samsung အနေနဲ့ ဒီတစ်နှစ်အတွင်း ငါးဖမ်းပိုက်အဟောင်း 50 Tons အထက် ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာထဲမှ ဆယ်ယူခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပြီး ရေထုဟာ ကမ္ဘာရဲ့ သုံးပုံနှစ်ပုံအထက်ကို နေရာယူထားပေမယ့် ရေချိုပမာဏဟာ 3% ပဲရှိတာမို့ 0.5% ပဲ အသုံးပြုနိုင်တာမို့ Reduce & Reuse လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို လိုအပ်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် Samsung ဟာ Device Solution Division က ကုန်ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာတွေမှာ ရေသုံးစွဲမှုကို Eco-conscious Water Treatment Technology ကိုသုံးပြီး လျှော့ချခဲ့ပြီးနောက် 2020 ခုနှစ်အရောက်မှာ ရေတန်ချိန်ပေါင်း ၁၀.၂၅ တန်အထိ သိသိသာသာလျှော့ချနိုင်ခဲ့ပြီး ရေတန်ချိန်သန်းပေါင်း ၇၀ ကျော်ကိုလည်း ပြန်လည်သုံးစွဲခဲ့တယ်။
ခုလိုလုပ်ဆောင်ချက်တွေကို Samsung က ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ရုံတင်မကပဲ User တွေကိုယ်တိုင် Awareness ရလာဖို့ “Galaxy for the Planet” Campaign Video မှာ Team Galaxy ဖြစ်တဲ့ BTS အဖွဲ့နဲ့လက်တွဲပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဖို့ လူသားအားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာ Viewer တွေသတိထားမိလာအောင် တင်ဆက်ပြသခဲ့တယ်။
ဒါ့အပြင် ထုတ်ပိုးမှုအပိုင်းတွင်လည်း Samsung က ၂၀၂၁ ခုနှစ်ကစပြီး အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ထုတ်ကုန်ဖြစ်တဲ့ Neo QLED TV အမျိုးအစားများနဲ့ Lifestyle TV များရဲ့ ထုတ်ပိုးမှုအသစ်များအားလုံးကို ပလတ်စတစ်အသုံးပြုခြင်းကို သိသိသာသာ လျော့ချနိုင်မယ့် လုပ်ဆောင်ချက် Eco-packaging ကို စတင်ကာအသုံးပြုလာပြီး၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်မှာတော့ ထုတ်ပိုးမှုအသားများအပေါ်၌ မှင်အသုံးပြုခြင်းကို ၉၀% ထိ လျော့သုံးလာပါတယ်။
တကယ်တော့ မိမိတို့နေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ဆက်ပြီးရှင်သန်စေနိုင်ဖို့ဆိုတာ လူသားတစ်ယောက်စီရဲ့ လိုက်နာလုပ်ဆောင်မှုပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့လည်း Reduce, Reuse & Recycle ဆိုတဲ့ အချက်သုံးချက်ကို စိတ်ထဲစွဲအောင် မှတ်ထားပြီး ပလတ်စတစ်အမှိုက်တွေကို စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရင်း၊ မလိုတဲ့ရေသုံးစွဲမှု တွေ တတ်နိုင်သလောက် လျှော့ချရင်း….
“Let’s heal the world and make itabetter place.”
MyBiz Myanmar2022-05-17T15:50:46+06:30May 17th, 2022|Biz News|